China metal metal prototype Manufacturer na ngwaahịa | Meste
A na-eme ihe ngosi ụdị igwe maka ndị injinia iji nyochaa njirimara nke ngwaọrụ ma ọ bụ igwe. Mestech na-enye ụdị nrụpụta ọla nke ndị ahịa.
Metal prototypea na-eme mgbe nile maka ndị injinia iji nyochaa njirimara nke ngwaọrụ ma ọ bụ igwe. Mestech na-enye ụdị nrụpụta ọla nke ndị ahịa.
A na-ejikarị akụkụ metal mee akụkụ ziri ezi na akụrụngwa akụrụngwa, ha dịkwa ọnụ karịa nke akụkụ plastik. Iji meziwanye atụmatụ ahụ ma belata ihe ize ndụ ahụ, ọ dị mkpa iji mee ihe nlele prototype maka imewe na nyocha usoro tupu ịmepụta ihe.
A na-ejikarị akụkụ ígwè dị iche iche arụ ọrụ dị iche iche na akụrụngwa dị iche iche. A na-ejikarị ha eme akụkụ ziri ezi n'ihi nkwụsi ike akụkụ ha, ike na ike, njirimara dị elu na nke dị ala na ikuku eletriki, nke kachasị elu karịa akụkụ plastik.
E jiri ya tụnyere akụkụ plastik, e nwere ọtụtụ ụdị ihe maka akụkụ ọla, dị ka alloy alloy, alloy copper, zinc alloy, steel, titanium alloy, magnesium alloy na na, na iche iche Njirimara. N'ime ha, a na-ejikarị ferroalloys, alloys alloys, alloys alloys and zinc alloys na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwaahịa obodo. Ihe igwe a nwere ụdị anụ ahụ na kemịkal dị iche, yana teknụzụ nhazi nke akụkụ igwe nwere akụkụ na ụdị dị iche iche.
Dabere na ihe na nhazi nke akụkụ ahụ, enwere ọtụtụ ụdị imepụta ihe dị iche iche na-akpụ usoro maka akụkụ igwe, dịka ịcha, ịnwụ anwụ, ịkọ ihe, ịkpụkọta akpụkọ, ikwe, ịgbatị na nsị. Maka nkedo na-anwụ, blanking, extrusion na sintering, a na-eji ebu ahụ. A ebu na-apụtakarị nnukwu ego mmefu, ya mere n'ibu ọnwụ na-adịkarị ji ha prototype Ndinam.
E nwere isi ihe atọ usoro iji mee metal prototype sample:
Karịsịa eji maka akụkụ nwere oke akụkụ ziri ezi na obere akụkụ.
Ngwa akụrụngwa bụ igwe igwe igwe CNC, lathe, grinder, EDM, WEDM na ngwaọrụ igwe ndị ọzọ.
Maka nhazi nke ugbo elu, elu ala, uzo na oghere nke axle, aka uwe, diski, akuku na akụkụ akụkụ akụkụ ya.
A na-eji ngwa ọrụ igwe eji eme ihe pụrụ iche iji hazie akụkụ yana oke mkpa achọrọ. Akụkụ ndị dị ka gears, screw rods, wdg.
2. Nhazi mpempe akwụkwọ
Maka shei na mkpuchi ihe mkpuchi na mgbidi dị mkpa na otu ọkpụrụkpụ ebe niile, a na-ejikarị usoro mpempe akwụkwọ eme ihe, ya bụ, site na igwe ịchacha laser na ụfọdụ ihe nrụnye ma ọ bụ ngwaọrụ dị mfe site na-ehicha, ịcha, ịpị na ịkụ. Ọ dabere na imepụta ntuziaka.
Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ụgbọ ala, chassis kọmputa, wdg.
3. Mbe Post-ọgwụgwọ
Mgbe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ mpempe akwụkwọ, a na-enweta akụkụ dị iche iche na ọdịdị. Iji nweta ezigbo mma na ọdịdị, a na-achọkarị ọgwụgwọ elu.
A. Mkpa finishing: egweri, polishing, texturing, laser osise na embossing.
B. Powder spraying, electroplating, oxidation na eserese.
Aluminom CNC machining prototypes
Nkenke machined ígwè prototype
Nnukwu ike, ihe mgbaze dị elu na-agbaze na njirimara na oke nkenke chọrọ nke ihe igwe na-ekpebi teknụzụ nhazi ha dị iche na nke ihe na-abụghị nke nwere ike (dị ka plastik) na-eme prototypes ma ọ bụ ihe atụ. Companylọ ọrụ anyị na-enye ndị ahịa ụdị nkwupụta zuru ezu ma ọ bụ ịmepụta mockup na ọrụ, gụnyere akụkụ plastik, akụkụ silica gel, akụkụ metal na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Fanye ịkpụzi
Osote: Plastic ebu maka laser ntutu mwepụ igwe
3d Metal Printing Prototype
Metal zọ Part Prototype